Friday . 14 August . 2020
ကမ္ဘာ့အဆင့်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကြက်တောင် အားကစားမယ်လေး သက်ထူးသူဇာ တစ်ယောက်ဟာဆိုရင် သူမဝါသနာပါရာ ကြက်တောင်ရိုက်အားကစားနဲ့ မြန်မာကို ကမ္ဘာကသိအောင် စွမ်းဆောင်နေတဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲတိုင်းလိုလိုမှာ ဆုတံဆိပ်တွေရရှိတတ်ပြီးတော့ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းနိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ဆွတ်ခူးပေးနိုင်ခဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ပြိုင်ပွဲများကို ကိုယ်စားရိတ်ကိုယ်စားပြီး လိုက်လံယှဉ်ပြိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၂၀ မှာ ကျင်းပမယ့် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆုတံဆိပ်တွေ ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲအတွက် ဝင်ခွင့်ရနိုင်ဖို့ ပြိုင်ပွဲတွေလိုက်လံယှဉ်ပြိုင်ပြီးတော့ အမှတ်များစုဆောင်းနေတာဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ အလီလီသော အောင်ပွဲတွေကြောင့် ယခင်က ကမ္ဘာ့အဆင့် ရာကျော်နေခဲ့ရာကနေ သူမရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၆၂ အဖြစ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်တွေကို သူမချစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာအလယ်မှာ သိစေဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာ ပိုက်ဆံ မလောက်လို့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ပင်သောက်ရတဲ့ နေ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်း သူမကိုယ်တိုင်ပြောပြလာခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာတော့ သူမဟာ မလေးရှားမှာ လေ့ကျင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကတစ်ဆင့် အိန္ဒိယကို သွားရှောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတဆင့်
ဆီးဂိမ်းကျင်းပမယ့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။